मंसिर १८, दैलेख । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको दैलेख खण्डको काम कछुवा गतिमा सीमित रहेको छ । काम शुरु भएदेखिनै ट्र्याक खोल्ने, ग्राभेल गर्ने र पिच गर्ने चरणबद्धरूपमा हुँदै आएको भए पनि गतिमा ढिलाइ भएको छ ।
आयोजनाले सडकको सबै पूर्वाधारको तयारीपश्चात् विसं २०७३ देखि मात्रै कालोपत्रका लागि ठेक्का खोलिएको दैलेख खण्डमा पर्ने १२५ किलोमिटर सडकमध्ये २५ किलोमिटर मात्र कालोपत्र भएको छ । अब काम धमाधम अगाडि बढिरहेको मध्यपहाडी आयोजना कार्यालय दैलेख प्रमुख डा अर्जुनकुमार बमले बताए ।
दुई ओटा पक्की पुलसहित १२ ओटा ठेक्का अहिले सञ्चालनमा आएका छन् । काम शुरु भएदेखि यो वर्षसम्मको ठेक्कामा कुल रू. चार अर्ब २७ करोडको लागतमा विभिन्न स्थानमा काम शुरु गरिएको छ । अहिलेसम्म रू. एक अर्ब ३४ करोड भुक्तानी भइसकेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यालय दैलेखका प्रमुख बमका अनुसार रुकुम पूर्व र अछामसम्म रू. १० अर्ब ८८ करोड ५९ लाख बराबरको विभिन्न ठेक्कामार्फत सडक कालोपत्रका लागि काम शुरु भइरहेकोे छ ।
सदरमुकामको पूर्वी खण्डमा पर्ने विभिन्न सडकखण्डको कालोपत्रेको काम विसं २०७७ असारसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने ठेक्का सम्झौता गरेका चार कम्पनीले कोरोना कहर देखाउँदै पुनः ६ महीनाका लागि म्याद थप गरेका छन् ।
विसं २०७७ असारसम्म काम सक्ने जिम्मेवारी पाएका रमन केएल जेभी, शर्मा गजुरमुखी, पुप्पु हाई हिमालय जेभीले म्याद थप गरेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । दैलेख खण्डका लागि ठेक्का सम्झौता गरेका अन्य नौ वटा कम्पनीको म्याद २०७८ र २०७९ मा सम्पन्न हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । रासस